Sina miresaka momba ny vinavinam-pivoarana misy kitapo tenona any amin'ny fireneko mpanamboatra sy mpamatsy | Jintang
Kitapo tenona PP
Kitapo vita pirinty offset sy Flexo
Kitapo misy lamina BOPP
Kitapo mifono anatiny
Kitapo vita amin'ny lamina miverina
Sack famahanana stock
Sakafo vita amin'ny zezika WPP
Kitapo fasika vita amin'ny Poly
Indostrialy PP Woven Sack
Kitapo sakafo misy tenona Poly
Kitapo fambolena tenona PP
Kitapo legioma PP
Kitapo valizy ambany
Sakano ny kitapo misy valiny ambany
Kitapo misokatra ambany ambany
Kitapo simenitra ambany
Kitapo PP Tenona Putty
Kitapo lafarinina PP tenona
Kitapo ilaina amin'ny sakafo PP
Kitapo valizy ambany PP
Kitapo lehibe / kitapo Jumbo
Kitapo Jumbo boribory
Sumb Jumbo Bag
Kitapo PP Woven Q
Lamba tenona PP
Miresaka momba ny fanantenana ho an'ny fampandrosoana kitapo misy tenona ao amin'ny fireneko
Abstract: Mino aho fa ny olon-drehetra dia tokony hahafantatra ilay kaontenera, izay kaontenera lehibe ampiasaina hitaterana sy hitahirizana entana. Androany, ny tonian-dahatsoratry ny plastika boda dia hampahafantatra anao ny anaran'ity entana ity izay teny iray monja avy amin'ny kaontenera, izay antsoina hoe FIBC.
Ny harona plastika any amin'ny fireneko dia aondrana any Japon sy Korea atsimo indrindra, ary mandroso am-pahavitrihana ny tsena any Moyen Orient, Afrika, Etazonia ary Eropa. Noho ny famokarana solika sy simenitra dia mitaky be ny vokatra FIBC ny Moyen Orient; any Afrika, saika ny orinasan-tsolika an'ny fanjakana dia mamokatra vokatra voatenona plastika avokoa, ary misy koa fangatahana lehibe ho an'ny FIBC. Azon'i Afrika ekena ny kalitaon'ny FIBC any Sina ka tsy misy olana lehibe amin'ny fanokafana ny tsena any Afrika. Etazonia sy Eropa dia manana fepetra takiana amin'ny kalitaon'ny FIBC, ary ny FIBC any Shina dia mbola tsy afaka mahafeno ny fepetra takian'izy ireo.
Ny kalitaon'ny FIBC dia tena zava-dehibe. Misy fari-pitsipika henjana ho an'ny vokatra FIBC eo amin'ny tsena iraisam-pirenena, ary tsy mitovy ny fifantohan'ny fenitra. Japon dia mitandrina amin'ny antsipiriany, mandinika ny endrika i Aostralia, ary ny fenitra fiarahamonina eropeana dia mijery ny fahombiazan'ny vokatra sy ny tondro teknika izay fohy. Etazonia sy Eropa dia mitaky fepetra henjana amin'ny fanoherana ny ultraviolet, ny anti-age, ny fiarovana ary ny lafiny hafa amin'ny FIBC.
"Safe factor" dia ny tahan'ny fifandanjana ambony indrindra amin'ny vokatra sy ny enta-mavesatra nomen'ny isa. Miankina indrindra amin'ny hoe misy tsy fetezana ao anaty sy ny vatan'ny kitapo, ary na simba ny mpiray na tsia. Amin'ny fenitra mitovy amin'izany ao an-trano sy any ivelany, ny antony fiarovana dia apetraka amin'ny 5-6 matetika. Ny vokatra FIBC miaraka amina avo dimy heny amin'ny antony azo antoka dia azo ampiasaina soa aman-tsara kokoa. Zava-misy tsy azo iadian-kevitra fa raha ampiana ireo mpanampy manohitra ny ultraviolet, dia ho malalaka sy hifaninana kokoa ny laharam-pahamehana FIBC.
Ny FIBC dia misy ampahany betsaka, granular na vovoka, ary ny hakitroky ny vatana sy ny famahana ny votoatiny dia misy fiatraikany lehibe amin'ny valiny ankapobeny. Raha ny fototry ny fitsarana ny zava-bitan'ny FIBC dia ilaina ny manandramana araka izay azo atao ny vokatra tadiavin'ny mpanjifa. Ity no "fenitra fenon'ny fitsapana" voasoratra ao amin'ny fenitra. Hatramin'izay azo atao dia tokony hampiasaina ny fenitra ara-teknika hiatrehana ireo fanambin'ny toekarem-barotra. . Amin'ny ankapobeny, tsy misy olana amin'ny FIBC mandalo ny fitsapana mampiakatra.
Ny vokatra FIBC dia manana fampiharana marobe, indrindra amin'ny famonosana simenitra betsaka, voamaina, akora simika, sakafom-pofona, zana-ketsa, mineraly ary vovo-tany ary zavatra goavambe, ary koa ireo entana mampidi-doza toy ny karbida calcium. Tena mety amin'ny famoahana, famoahana entana, fitaterana ary fitehirizana. . Ny vokatra FIBC dia eo amin'ny dingan'ny fampandrosoana, indrindra ny endrika iray taonina, pallet form (paleta iray misy FIBC iray, na efatra) FIBC malaza kokoa.
Ny fanamarinana ny indostrian'ny fonosana eto an-toerana dia ao ambadiky ny fivoaran'ny indostrian'ny fonosana. Ny famolavolana fenitra sasany dia tsy mifanaraka amin'ny famokarana tena izy, ary ny atiny dia mbola eo amin'ny haavo efa folo taona lasa izay. Ohatra, ny fenitra "FIBC" dia namboarin'ny departemantan'ny fitaterana, ny fenitra "Bag Simenitra" novolavolain'ny departemantan'ny fitaovam-panorenana, ny fenitra "Geotextile" dia namboarin'ny departemanta lamba, ary ny fenitra "Woven Bag" dia namboarina nataon'ny departemanta plastika. Noho ny tsy fisian'ny fifandraisan'ny fampiasana vokatra sy ny fiheverana feno ny tombontsoan'ny indostria dia mbola tsy misy fenitra mirindra, mandaitra ary mifandanja.
Mihombo ny fampiasana FIBC eto amin'ny fireneko, ary mitombo ihany koa ny fanondranana FIBC ho an'ny tanjona manokana toy ny calcium carbide sy ny mineraly. Noho izany, ny fangatahana tsena ho an'ny vokatra FIBC dia manana potika lehibe ary malalaka ny vinan'ny fampandrosoana.
Fotoana fandefasana: Jan-11-2021
Ireo mpanamboatra kitapo simenitra dia mamakafaka ny spec ...
Miresaka momba ny ho avin'ny fampandrosoana ...
Ahoana ny fanitarana ny androm-piainan'ny tenona b ...
Adiresy: South of Hexi Village, Chengzhai Town, Xingtang County, shijiazhuang, hebei.china
© Copyright - 2010-2020: Voatahiry ny Zo rehetra. Vokatra asongadina, Sitemap
Kitapo misy lamina Bopp, Pp Fonosana, Pp Kitapo tenona, Pp Cement Block Valve ambany kitapo, Kitapo valizy ambany, Kitapo fonosana simenitra eo ambanin'ny valizy, Vokatra rehetra